Tombony 7 ambony indrindra amin'ny Semax tokony ho fantatrao alohan'ny hampiasana azy - Phcoker
Ny tombotsoan'ny 7 ambony amin'ny Semax tokony ho fantatrao alohan'ny hampiasana azy
Septambra 11, 2019
1. Inona ny atao hoe Semax Peptide?
2. Semax fampiharana
3. Semax mahasoa
4. Ahoana no fiasan'ny Semax?
5. Ahoana no fomba hampiasaako ny Semax?
6. Misy vokatr'izany ve rehefa mampiasa Semax ianao?
7. Tokony hampiasa kitapo Semax ve ianao rehefa mampiasa?
8. Inona no tsy mampitovy ny Semax vs Selank?
9. Aiza no ahitako Semax an-tserasera?
Phcoker dia mpanamboatra matihanina hamokatra vovoka semax
Semax dia novolavolaina tao amin'ny 1980 sy 90, avy eo nankatoavina tany Rosia taty aoriana mba hikarakarana ireo tratran'ny fahatapahan'ny lalan-dra, fahasimban'ny ati-doha ary fahapotehana kognitif. The Semax peptide niharan'ny fandinihana olombelona maro tao Rosia, ary voaporofo fa manana fananana mampitombo ny fahatsapan-tena.
Etsy ankilany, misy ihany koa ny fikarohana ara-pitsaboana voarakitra an-tsoratra momba ny fomba ahafahan'ny fanafody manampy amin'ny fampihenana ny fitaintainanana ary koa ny fanatsarana ny toetran'ny mpampiasa. Semax dia ampiasaina ho toy ny nootropic mahazatra, nefa koa misy fampiasana fanampiny toy ny fampitomboana ny fahasalaman'ny ati-doha sy amin'ny fanamafisana ny hery fiarovan'ny vatana amin'ireo asa hafa. Ny tombotsoan'ny semax dia tsy azo tsapain-tanana raha raisina tsara ny fanafody. Na izany aza, alao antoka fa mahazo fitarihana amin'ny dokotera ianao raha te hanana vokatra sy traikefa tsara kokoa.
1. Inona ny Semax Peptide?
Semax (80714-61-0) dia fanafody peptide izay novolavolaina tany Rosia tamin'ny taona 1980 hanampiana amin'ny fitsaboana sy fifehezana ireo korontana toy ny tapaka lalan-dra. Androany, ny fanahiana Semax dia voatanisa ao amin'ny lisitry ny zava-mahadomelina Rosiana aorian'ny nanaporofoana ny fahombiazany amin'ny fitsaboana aretina samihafa.
Ny dokotera dia manondro an'i Semax ho toy ny fanafody nootropic aorian'ny fahatsapana fa izy io koa dia afaka mitana andraikitra lehibe amin'ny fanatsarana ny fahatsiarovan-tena sy ny fihenan'ny adin-tsaina. Na dia nanaiky ny fampiasana an'io fanafody io aza i Russia sy Ukraine, dia mbola tsy hanaiky izany ny firenena hafa toa an'i Etazonia na dia hita fa tena ilaina amin'ny fitsaboana ny aretina aza. Na izany aza, tsy manakana anao tsy hampiasa vovoka Semax izany.
Ankoatry ny vovoka Semax mahazatra dia misy karazany roa ihany koa eny an-tsena, saingy saika mitovy amin'ny fomba fiasan'izy ireo. Anisan'izany i Na-Semax-Amidate sy N-Acetyl. Amin'izao fotoana izao dia tsy misy fandalinana marobe izay natao na voarakitra an-tsoratra momba ireo kinova Semax roa. Na izany aza, avy amin'ny fanadihadihana Semax, misy ny mpampiasa dia nitatitra fa Na-Semax-Amidate dia matanjaka amin'ny fampivoarana ny fifantohana ary ny N-Acetyl Semax kosa manome hery kokoa. Ny valin'ny Semax dia mety tsy mitovy amin'ny olona iray mankany amin'ny iray hafa, miankina amin'ny fandraisan'ny vatana ny fatra. Azonao atao ihany koa ny manandrana ny kinova Semax saingy alao antoka fa mampiditra ny dokoteranao amin'ny fizotran'ny fatra.
The Ny vovony Semax dia misy amin'ny fivarotana an-tserasera sy ara-batana isan-karazany manodidina anao izay ahafahanao manafatra ny fotoana rehetra. Makà amidy Semax amin'ny mpivarotra na mpamatsy azo antoka sy efa za-draharaha. Tsy ny mpivarotra zava-mahadomelina rehetra no manome vokatra kalitao, ary tsara foana ny mianatra ireo mpamatsy Semax alohan'ny hanaovana ny baikoo. Fantaro ny fomba fiasan'ny magazay sy ny faharetan'ny fotoana alohan'ny hahazoanao ny Semax (80714-61-0).
Manoro hevitra anao ihany koa ny handeha hanao fizahana ara-pahasalamana alohan'ny hanombohanao mihinana ity fanafody ity. Semax amidy dia fanafody fanafody, noho izany, ny dokoteranao dia tokony ho olona mety hametraka fatra mety aminao aorian'ny fizahana ny toe-pahasalamanao. Ny fizotran'ny fitsaboana dia mila arahi-maso ihany koa amin'ny matihanina amin'ny fahasalamana mba hahitana vokatra tsara kokoa.
Rehefa mividy Semax (80714-61-0), tahirizo lavitra ny ankizy hahatratra sy ao anaty vata fampangatsiahana satria afaka manala baraka toy ny peptide hafa izy. Ho an'ny tsaratsara kokoa, Semax, ataovy izay hahazoana antoka fa manaraka ny torolàlana momba ny fatra rehetra ianao. Aza manitsy ny fatra raha tsy mampandre ny dokoteranao.
Araka ny voalaza tetsy aloha, Semax peptide tena nilaina teo amin'ny tontolon'ny fitsaboana, indrindra amin'ny fitsaboana ireo toe-javatra samihafa. Any Rosia dia nankatoavina ny zava-mahadomelina taorian'ny fahatsapany fa afaka manampy amin'ny fifehezana ny aretin'ny fivezivezena toy ny tapaka lalan-dra io. Na izany aza, ny fandalinana Semax natao nandritra ny taona maro dia nanambara ihany koa ireo aretina hafa izay afaka tsaboin'ny zava-mahadomelina.
Ny firenena na ny dokotera samihafa dia mampiasa Semax hitsaboana aretina isan-karazany. Ny fanahiana Semax dia ampiharina ao anaty vatana, fa ny rano mitete ihany no tsy mitovy arakaraka ny fahasalaman'ny fitsaboana. Misy ihany koa ny endrika Semax azo atsofoka izay tsy tokony hitantana afa-tsy mpitsabo matihanina. Aza adino ny mitahiry fanafody ao anaty vata fampangatsiahana.
Semax dia nootropic izay nanaporofo fa tena ilaina amin'ny fanampiana ny atidohanao amin'ny fomba samihafa. Hatramin'ny nankatoavina an'i Semax amin'ny fampiasana fanafody any 2011, ny fanafody dia ampiasaina amin'ny fitsaboana ny toe-pahasalamana isan-karazany. Rehefa alaina marina, dia afaka manome ireto tombony ireto ireto fanafody;
1. Fahazavana ny ADHD Sintoma
Semax dia manana vokatra izay manampy amin'ny fitsaboana ny soritr'aretin'ny ADHD. Ny fandalinana ara-pitsaboana dia mampiseho fa ny Semax dia manatsara ny fitadidiana ary mampitombo ny neurotransmitters, izay ambany indrindra ho an'ny olona manana ADHD. Amin'izao fotoana izao, Semax dia fitsaboana iray hafa ho an'ireo ankizy manana ADHD any Rosia. ADHD dia toe-tsaina neurodevelopmental izay mety hanelingelina ny haavon'ny dopamine, ary Semax dia nanaporofo fa tena ilaina mba hamahana ilay olana.
2. Misoroka ny fahavoazana Oxidative
Tamin'ny voalohany, Semax dia natao hanampiana ny aretim-po sy ny naratra. Nandritra ny taona maro izay, ny zava-mahadomelina dia tena ilaina amin'ny fifehezana sy ny fisorohana ny fihenan'ny oxidative. Ny fahasimbana Oxidative dia mitranga noho ny adin-tsaina ataon'ny oxidative, izay tsy fahampiana radikaline sy antioxidant malalaka ao amin'ny vatanao. Ny adin-tsaina miadana oxidative vokatry ny fanatanjahan-tena dia manampy amin'ny famerana ny fitomboan'ny taolana satria manosika ny famokarana antioxidant.
Na izany aza, ny adin-tsaina fananganana oxidation maharitra noho ny aretina na ny toe-javatra toy ny fahatapahan-doha dia miteraka fahasimban'ny proteinina, sela vatana ary ADN. Araka ny Fandalinana Semax, ny fampidirana ny zava-mahadomelina amin'ny fanafody fivontosana dia nisy fiatraikany lehibe tamin'ny famerenana ny tahan'ireo fiasa simba simba. Ireo fiantraikany ireo dia manampy ireo niharam-boina mba hisorohana ny aretin'ny môtô, ny serebral ary ny loharano.
3. Manampy amin'ny fampihenana ny adin-tsaina
Ny adin-tsaina dia mety ho vokatry ny toe-javatra maro toa ny aretina, ny tsy fahampian-torimaso na ny ratra ara-batana. Samy hafa ny vatan'olombelona ary noho izany dia mihetsika amin'ny fihenjanana amin'ny fomba hafa ihany koa izy ireo. Ohatra, ny vatan'ny olona sasany dia mamaly ny adin-tsaina amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny famokarana angovo enina. Ny fikarohana no naneho an'izany Semax ho an'ny fahaketrahana mihena ny famokarana angovo enzymatana rehefa omena biby mandritra ny fikarohana ara-pitsaboana. Etsy ankilany, ny matihanina ara-pahasalamana dia nanambara fa ny Semax dia manao normalize ny fiovan'ny vatana vokatry ny adin-tsaina vokatry ny ratra ara-batana.
4. Manatsara ny fandehanan-dra
Ny antony mety hampidi-doza indrindra ho an'ny lalan-drà dia ny tsy fisian'ny fifindran'ny ra ao anaty atidoha, fepetra iray izay fantatra amin'ny hoe tsy fahampian'ny cerebrovascular. Ny fampiasana Semax amin'ny fitsaboana fivontosana dia namoaka valiny tsara tamin'ny fanatsarana ny fifindran-dra amin'ny atidoha. Ity fanafody ity koa dia misy fiantraikany amin'ny fisorohana ny fonao tsy hitombo rehefa manana tosi-dra avo ianao. Ho anao, izany no miaro anao amin'ny tsy fahombiazan'ny fo, na dia tratran'ny hafanana aza ianao.
5.Increases ny Factor Neurotropic Brain-Derished Brain (BDNF)
Ny BDNF dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fahaveloman'ny neurons, ny fivoaran'ny kognita ary ny plastika amin'ny synapses. Ny haavon'ny BDNF ambany dia mety hitarika na hampitombo ny fahaketrahana sy ny fitaintainanana. Raha toa ka mampiharihary vokany kely dia kely ianao, Semax koa dia nanaporofo fa tena tsara BDFN enhancer sy antidepressant. Ny fanafody dia afaka manatsara ny famokarana BDNF mividy hatramin'ny 800%.
Amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny famokarana BDNF dia manampy amin'ny fifehezana sy fanalefahana ny tebiteby sy ny hakiviana ny Semax. Ny fandalinana ara-pitsaboana antidepresan dia nanaporofo fa manana fiatraikany tsara amin'ny haavon'ny fahaketrahana ny haavon'ny BDNF. Semax dia mandrisika ireo mpandray ireo rafi-pitatitra amin'ny taovam-pananahana mba hamokatra adenosine, dopamine, serotonin, ary histamine, izay manampy amin'ny mora
ng soritr'aretina mifandraika amin'ny ADH, tebiteby ary fahaketrahana. Ny fitomboan'ny neurotransmitter rehetra dia mampitombo ny antony manosika, ka manatsara ny fifantohana sy ny famokarana.
6. Semax dia afaka manampy amin'ny fanamaivanana fanaintainana
Rehefa mahatsapa fanaintainana sasany ianao, ny atidohanao dia mamoaka ny neurotransmitter matetika antsoina hoe enkephalins, izay mampihena ny fahatsapana fanaintainana. Manova ny fahatsapana fanaintainana ihany koa izy io amin'ny fanalefahana ny fahatsapana panintona mitranga rehefa marary ianao.
Enkephalins dia afaka mifehy ny fanaintainan'ny vatana mandritra ny fotoana maharitra; koa, Semax dia manampy amin'ny fisorohana ny fahavoazana ary koa ny fampitomboana ny famokarana. Noho izany, manampy amin'ny fampihenana ny fanaintainan'ny fanaintainana ao amin'ny vatanao mandritra ny fotoana maharitra ary mahatonga an'i Semax ho fanaintainana fanaintainana mahery vaika.
7. Semax Manatsara ny fihazonana ny fitadidiana
Ny Neurotransmitters toy ny enkephalins dia misy fiantraikany amin'ny fiheverana, ary rehefa mitombo izy ireo, dia manana anjara toerana lehibe amin'ny famoronana fahatsiarovana sy ny fifehezana ny toe-po. Fikarohana ara-pitsaboana izay natao tany Rosia, momba ny mpiasa salama tsara. Ny vovony Semax nanatsara ny fihazonany ny sainy sy ny fitadidian'izy ireo. Ny fikarohana siantifika dia milaza fa ny fampiroboroboana ny fivezivezena ra sy ny fiarovana oksidana ao amin'ny ati-dohan'olombelona dia mampitombo ny fitadidiany.
Ny fitomboan'ny haavon'ny BDNF ao amin'ny hippocampus dia voalaza ihany koa fa tena ilaina amin'ny fanatsarana ny fahatsiarovana satria ny hippocampus no foiben'ny ati-po sy fahatsiarovana. Etsy ankilany, ny BDNF koa dia manampy amin'ny fampivoarana ny fahatsiarovana, fahatsiarovana ary fahaizana hianatra sy hihazonana vaovao vaovao. Ny BDNF dia mandrisika ny famokarana Neurogenesis, izay andiam-pandehanana lalan-drà ao amin'ny ati-doha izay manampy amin'ny fanatsarana ny fiasan'ny ati-doha sy ny fikarakarana.
Semax dia zava-dehibe sy ny fanafody rehefa ampiasaina hitsaboana aretina isan-karazany. Raha vao tafiditra ao amin'ny rafitry ny vatanao izy, ny Semax dia mampitombo ny haavon'ny neurotropic nateraky ny atidoha (BDNF) ary ny fahombiazan'ny koa.
Ara-tsiantifika, ny BDNF dia proteinina mampiroborobo ny fahasalaman'ny ati-doha amin'ny alàlan'ny fiarovana sy fanamafisana ny selan'ny atidohanao, fampiroboroboana ny fitomboan'ny sela ao amin'ny ati-doha, ary fampiroboroboana ny tsy fahaizan'ny ati-doha. Matetika, ny nootropic rehetra izay mampitombo ny haavon'ny BDNF dia manatsara ny fahalalana amn'ny mpampiasa maro, ary Semax dia voaporofo ho ohatra tonga lafatra amin'ny famenon-tsakafo mahery vaika BDNF.
Amin'ny tranga sasany, Semax stack dia ampiasaina hanatsarana ny toe-po sy ho toy ny fanafody mampiadana. Izany dia satria mampitombo ny fiasa dopamine sy serotonin ao amin'ny vatanao, izay neurotransmitter misy fiatraikany lehibe amin'ny fitaintainanana sy fahaketrahana. Nandritra ny taona maro, ny mpitsabo dia nanohy nahita toe-pahasalamana isan-karazany izay azon'i Semax resahina.
Ny fatra semax dia miankina amin'ny toe-pahasalamana eo am-pitsaboana, ary ny fatra dia tokony hapetraky ny mpitsabo matihanina. Ilay soso-kevitra Dosis Semax ao amin'ny 300mcg ka 600mcg. Na izany aza, manoro hevitra ireo mpampiasa vaovao hanomboka amin'ny dosage ambany, izay azo amboarina any aoriana any ataon'ny dokotera aorian'ny fanaraha-maso ny valin'ny vatanao amin'ny zava-mahadomelina.
Miaraka amin'ny zava-mahadomelina, tsy tokony hisy olona ahiana hihinana doka avo ho fanombohana satria mety hitera-doza izany. Mba hisorohana ny risika mifandraika amin'ity zava-mahadomelina ity toy ny fihenan'ny volo Semax dia hevitra tsara foana ny mandeha amin'ny fizahana ara-pitsaboana alohan'ny handraisana an'io fanafody io na inona na inona antony.
Ny semax dia matetika no raisina ara-nofo, ary indroa na in-telo isan'andro isan'andro no tokony alainao isaky ny vavorona roa mandritra ny tsingerina apetraky ny dokoteranao. Ny fepetra sasany toy ny rehefa mandray Semax mandritra ny vanim-potoana fanarenana aorian'ny fitsaboana dia tokony hihinana 2 nilatsaka isaky ny orona ianao, inenina isan'andro. Ho an'ny fahatsiarovana Post narcosis na fikorontanan'ny sain'ny olona, ​​ny fatra atolotra dia 3 latsaka isaky ny orona in-telo isan'andro. Semax ho an'ny fahaketrahana 4 ka hatramin'ny 3 latsaka isaky ny orona, intelo isan'andro no fatra tokony homena.
Raha ny tsara indrindra, ny Semax tsindrona injeniera dia hiankina amin'ny toe-pahasalamana amin'ny fitsaboana. Na izany aza, mifikitra amin'ny toromarika nomen'ny dokotera satria mety tsy miasa ho anao ny torohevitra nataon'ny mpanamboatra. Ny mpampiasa sasany dia mety mahazo valiny kalitao rehefa maka fatrany ambany, ny hafa kosa mila fatra avo kokoa hahazoana ny vokatra irina. Toe-javatra mahazatra izany satria ny herin'ny vatan'ny olona dia tsy mitovy amin'ny olona tsirairay.
a) Semax tsindrona
Semax dia azo tanterahina amin'ny alàlan'ny tsindrona ihany koa, izay mety ho fatra tsara indrindra ho an'ireo mpampiasa tsy mahazo aina amin'ny sifotra nasal. Ireo sifika Semax Nasal sy ireo endrika fitrandrahana subcutaneus dia ampiasaina amin'ny tanjona mitovy izay tsy mitovy amin'ny fampiharana azy ireo.
Mety hangataka anao ny dokotera anao hisafidy endrika dosie eo anelanelan'izy roa. Matetika, ny fatran'ny tsindrona dia mahery vaika raha oharina amin'ny endrika Semax hafa. Noho izany dia tsy mila mandray tsindrona tsy tapaka toa ny vongan-orona ianao izay tsy maintsy misintona in-telo na in-telo isan'andro na mihoatra.
b) Fatran'ny tsindrona semax
Be loatra Tsindrona Semax manome safidy tsara indrindra amin'ny fatran'ny orona, ataovy izay hahazoana antoka fa mahazo ny tsindrona avy amin'ny dokotera ianao. Ny fepetra samihafa dia mitaky fatra hafa. Ny fizaham-pahasalamana dia hitarika ny mpitsabo anao amin'ny fametrahana fatra mety aminao. Ny fatra Semax dia tokony ho 300mcg ka hatramin'ny 600mcg.
Ny fatra dia azo ahena kokoa arakaraka ny fandraisan'ny vatanao ny fatran'ny tsindrona Semax voalohany na ahitsy miakatra aza. Raha tsy azonao antoka ny mampiditra ny tenanao dia azonao atao ny mangataka amin'ny dokoteranao hampiofana anao na handamina fitsidihana matetika haka ny fatrao. Aza mampidi-doza ny mampiditra ny tenanao raha tsy hainao ny manao azy satria mety hiteraka fahasarotana ara-pitsaboana hafa izany.
Semax dia tsy zava-mahadomelina malaza any Etazonia satria ny FDA dia tsy nankasitraka azy io hatramin'ny namolavola azy. Na izany aza, be dia be ny fikarohana sy ny fitsapana natao tany Rosia izay manaporofo ny fahombiazan'ny Semax.
Ny zava-mahadomelina dia naseho tamin'ny fanandramana ara-pitsaboana isan-karazany momba ny olombelona, ​​ary saika ny fitsapana rehetra dia tsy mitatitra ny fiatraikany ratsy momba ny Semax. Izany no mahatonga an'i Semax ho iray amin'ireo nootropic azo antoka indrindra eny an-tsena ankehitriny. Any Rosia, Semax dia tena ilaina amin'ny fitsaboana aretina isan-karazany toy ny aretin'andoha, ny lalan-dra ary ny aretin-tsaina.
Ny endrika tena manaitra an'io zava-mahadomelina io dia misy hery mahery vaika, saingy na dia alaina ambony fatra aza dia mety tsy hanimba ny vatanao. Na izany aza, tsy nampiasan'ny olona maro tany ivelan'i Rosia i Semax mandra-pahatongan'ny fankatoavan'i Ukraine ny fampiasana azy. Ny haavon'ny fandeferana amin'ny vatanao dia afaka mamaritra ihany koa, ny valin'ny Semax izay ho azonao rehefa alainao ny fanafody.
Ny voka-dratsin'ny Semax kely sasany dia notaterin'ny mpampiasa Semax sasany toy ny vava maina, ny hatsembohana mihombo, ny fisaleboleboana ary ny faharendremana. Ny fihenan'ny Semax sy ny volo dia vokatra hafa mahazatra ihany koa notaterin'ny mpampiasa Semax sasany. Ireo voka-dratsy rehetra ireo dia tsy dia voalaza loatra, saingy afaka mifehy azy ireo ny mpitsabo. Tsy mitovy ny vatan'olombelona, ​​ary raha sendra misy vokany ratsy hafa eo amin'ny Semax dia ampahafantaro ny dokoteranao avy hatrany raha mila fanampiana ianao.
Matetika ny Semax dia manome valiny kalitao rehefa ampiasaina irery ho an'ny fitsaboana ny toe-pahasalamana isan-karazany. Na izany aza, sahala amin'ireo nootropika betsaka, azonao atao ny fahombiazan'ny Semax farany rehefa mitondra azy ao anaty andiany izy. Kratom, izay koa malaza nootropic malaza eo an-tsena ampiasaina ho toy ny sedative sy manaitaitra no mametraka tsara amin'ny Semax. Tahaka ny ahafahan'i Semax miala voly sy manome hery ny mpampiasa, ny fandraisana azy miaraka amin'i Kratom dia manatsara ny vokatra irina.
Manoro hevitra anao ny handinika ny hametahana Semax miaraka amin'ny Phenylpiracetam noho ny famotehana angovo mety ho vokatry ny fihinanana an'io fanafody io amin'ny stimulant. Phenylpiracetam dia nootropic mampiroborobo ny fahalalana fa miadana mihetsika. Etsy ankilany, mpampiasa maro no nitatitra fa mahazo tombony lehibe Semax rehefa ampiarahin'izy ireo amin'ny stimulants hafa toy ny curcumin izay mamela tondra-drano maharitra maharitra ao amin'ny vatana.
Ho an'ireo mpampiasa Semax izay efa nisedra fitebiteby dia tokony hieritreritra ny hanambana ny zava-mahadomelina miaraka amin'i Ashwagandha, izay miasa aina amin'ny fialana aina. Ashwagandha dia mahery Nootropic izay afaka manampy amin'ny fanalefahana ny fihanaky ny soritr'aretina Semax.
Amin'ny lafiny rehetra, Semax dia azo apetraka miaraka amin'ny nootropics samihafa hanamafisana ny valiny andrasana. Na izany aza, raha tsy azonao antoka ny momba izay nootropic hampiarahana amin'i Semax, makà torohevitra foana amin'ny dokotera. Tena mifototra amin'ny fahasalamanao ny fitetezana diso.
Semax sy Selank dia ny nootropika rehetra novokarina tao Rosia, ary indraindray izy ireo dia ampiasaina amin'ny fitsaboana ny toe-pahasalamana mitovy amin'ny fanitsiana sy ny fanahiana. Ho an'ny valiny farany dia azo ampiasaina miaraka miaraka ihany koa ny fanafody roa. Selank dia peptide anxiolytika izay manamaivana ny fihenan-danja amin'ny adin-tsaina ary fantatra fa tsy mitondra voka-dratsy lehibe toa an'i Semax.
Amin'ny ankapobeny, Selank dia avy amin'ny Tuftsin tetogeneptogen, izay mitana anjara toerana lehibe amin'ny rafi-piarovana anananao. Ho fanamafisana ny fiantraikan'ny Selank sy hampihenana ny fahatapahan'ny peptide dia nampiditra an'i Glyproline tao amin'ny firafiny ireo mpanamboatra.
Ny mode of Selank ao amin'ny atidoha dia tena miavaka; Izy io dia fanafody manohitra ny tebiteby amin'ny alàlan'ny famenonam-bokatra anti-asthenic sy antidepressant izay manatsara ny hetsika fahatsiarovan-tena sy fitadidiana. Noho izany, Semax vs Selank mety hiteraka adihevitra, fa ireo zava-mahadomelina roa dia enhancer cognitive tsara. Ny Selank dia tantanana intranasally, ary mety tsy hitovy ny fatran'ny fanafody.
Ireo fanafody roa ireo dia samy hafa kokoa amin'ny fomba ampiasana azy ireo hitsaboana olana samihafa amin'ny fahasalamana. Semax dia matanjaka kokoa amin'ny fanatsarana ny fahalalana sy ny fahaketrahana, ary i Selank kosa manome valiny kalitao rehefa ampiasaina ho fanoherana ny tebiteby. Na izany aza, ny zava-mahadomelina dia mampitombo ny haavon'ny BDNF, ary indraindray azo ampiarahana izy ireo, araka ny voalaza tetsy aloha. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny Semax vs Selank dia mankanisa any amin'ny mpitsabo matihanina.
Raha any Russia ianao dia amidy amin'ny alàlan'ny dokotera ny Semax. Na izany aza, any Etazonia, dia tsy voafehy firy ny zava-mahadomelina, na dia tsy nankatoavin'ny FDA aza izany. Midika izany fa azonao atao ny miditra amin'ny alàlan'ny fivarotana nootropic amin'ny Internet. Manoro hevitra hatrany ireo mpampiasa Semax izahay mba hitandrina tsara ary haka ny fotoanany hahazoana ilay mpamatsy Semax tsara indrindra. Ataovy ny fikarohana ataonao, zahao ny hevitry ny mpanjifa mba hahalalanao ny fomba fiasan'ny mpamatsy Semax alohan'ny hanaovana ny kaomandinao. Tadidio fa tsy ny mpivarotra Semax rehetra hitanao eny an-tsena no azo itokisana.
Ny vaovao tsara dia izahay no mpamatsy Semax voalohany ao amin'io faritra io. Azonao atao ny manamboatra ny baiko amin'ny tranokalanay ary mahazo antoka fa handray ny vokatrao ao anatin'ny fotoana fohy indrindra. Semax amidy sy Semax stack dia hita ao amin'ny magazay an-tserasera mpampiasa.
Mikarakara izahay Mpamatsy semax mpamatsy, ary noho izany dia mampitandrina ny mpanjifa hajaina rehetra izahay tsy handray zava-mahadomelina nefa tsy mandalo fizaham-pahasalamana na misy mpitsabo matihanina amin'ny tsingerin'ny dosie iray manontolo. Ampahafantaro koa ny dokotera avy hatrany fa mahatsapa fiatraikany mahery vaika ianao.
Dolotov, OV, Eremin, KO, Andreeva, LA, Novosadova, EV, Raevskii, KS, Myasoedov, NF, & Grivennikov, IA (2015). Semax dia manakana ny fahafatesan'ny tyrosine hydroxylase-positive neurons amin'ny kolontsaina sela mifangaro mifototra azo avy amin'ny embryonic rat mesencephalon amin'ny maodelin'ny neurotoxisika 6-hydroxydopamin Gazety neurokimia, 9(4), 295-298.
Koroleva, SV, & Myasoedov, NF (2018). Semax ho zava-mahadomelina manerantany ho an'ny fitsaboana sy ny fikarohana. Bulletin biology, 45(6), 589-600.
Manchenko, DM, Glazova, N., Levitskaia, NG, Andreeva, LA, Kamenskiĭ, AA, & Miasoedov, NF (2010). Ny vokatry ny Nootropic sy analgesic an'ny Semax manaraka ny làlan'ny fitantanan-draharaha samihafa. Rossiiskii fiziologicheskii zhurnal imeni IM Sechenova, 96(10), 1014-1023.
Malyshev, AV, Razumkina, EV, Dubynin, VA, & Myasoedov, NF (2013, Mey). Semax manitsy ny tsy fiasan'ny ati-doha vokatry ny fampidirana asidra valproic mialoha ny fananahana. In Doklady Siansa siantifika (Vol. 450, No. 1, p. 126). Springer Science & Business Media.